सोल्टिनी रेखासँग तक्मे बुढाको रोमान्स ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
सोल्टिनी रेखासँग तक्मे बुढाको रोमान्स !
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७४, शुक्रबार
काठमाडौ, १६ भदौ । मध्यान्हतिर बुधबार सिखाली चौरमा चर्चित हास्य अभिनेता विल्सनविक्रम राई ‘तक्मे बुढा’ र अभिनेत्री रेखा फागो सँगै भेटिए । जहाँ तक्मे बुढा लजाइरहेका थिए । सोल्टिनीसँग भेटिँदा उनी लजाएका हुन् ।